देउवा हाईस्कुलको मञ्चमा उक्लिदा ‘नो एमसीसीको प्लेकार्ड देखाउने को हुन् ? « Nepal Bahas
देउवा हाईस्कुलको मञ्चमा उक्लिदा ‘नो एमसीसीको प्लेकार्ड देखाउने को हुन् ?
प्रकाशित मिति : २१ पुष २०७८, बुधबार ११:४७
२१ पुस, सुनसरी । २० पुसमा धरान स्थापना दिवस कार्यक्रमको उद्घाटनमा पुगे, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । दिवसका अवसरमा धरान उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा नै दिएको थियो ।
जब प्रधानमन्त्री देउवा “धरान डे” कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पब्लिक हाईस्कुलको मञ्चमा उक्लिए । मञ्च अगाडि फरक दृश्य देखियो ।
एउटा हातमा नेपालको झण्डा अनि अर्को हातमा प्ले कार्ड । झण्डामा लेखिएको थियो, शुम्भ रक्षक नै निशुम्भ भक्षक अनि प्ले कार्डमा ‘गुम्नेछ नेपाल आमा’ शीर्षकको कविता । त्यही कविताको एकलाइनमा थियो ‘नो एमसीसी’
कवितामा लेखिएको थियो
हे धर्ती माँ सुपुत्र गतिलो बिस्यौ कि जन्माउन ?
एमसीसीले तान्दा ती फरिया, ताली झोले ठोक्नेछन् ।।
कानुन नै निब बेच्छ कलमको, न्याय त्यहाँ मर्दछ ।
रक्षक नै छ विदेशी भतुवा, दासत्व स्वीकार्दछ ।।
देशभन्दा ठूलो पार्टी देख्ने, अन्ध दृष्टि फुटाऊ ।
स्वयं आफ्नै चुरासारी, कुलाङ्गारलाई घेराउ ।।
तिम्रा पुत्र रिपु भगत भए, पिउँछन् तिम्रै रक्त ।
छाती तिम्रा परेड खेल्न, आउँछन् विदेशी धूर्त ।।
अर्काकै भरमा चल्छौ यदि भने, के काम तिम्रो यहाँ ?
आर्यघाट बल्दा चिता दनदनी, चित्कार सुन्नु त्यहाँ ।।
बालुवाटार लम्पसार भए, बिक्री गरे सब गरिमा
न गानधारी बन न धृत राष्ट्र, गुम्नेछ नेपाल आमा
कपाल सेतै फुलेका, उमेरले पाको देखिने ती व्यक्ति हुन् धरान उपमहानगरपालिका-७ का बासु चालिसे । ६६ वर्षीय चालिसे अमेरिकाले नेपाललाई दिने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदान (एमसीसी) संसदबाट पास गर्न नहुने भन्दै विरोधमा आएका हुन् ।
एमसीसी देशको हितविपरीत रहेको भन्दै उनले देश निर्माणमा लागेका रक्षक नै भक्षक भएको र जनता जाग्नुपर्ने बताए ।
एमसीसीको विषय बाहिर आएदेखि करिब डेढ वर्ष अगाडिदेखि उनी झण्डा र कविता लेखिएको प्ले कार्ड लिएर हिँडिरहेका हुन् । झण्डाको अर्को पट्टी राहु र केतु लेखिएको छ । जसको अर्थ चन्द्रमा र सूर्यमा ग्रहण लागि सक्यो भन्दै देशलाई जोगाउनु पर्ने चालिसे बताउँछन् ।
तर, उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई देखाउन लागेको प्लेकार्ड र झण्डा सुरक्षाकर्मीले खोसेका थिए । उनी यसअघि नेपाल बैंकमा जागिरे थिए ।
ताप्लेजुङमा तेस्रो पटक हिमपात, जनजीवन प्रभावित
कोरोना बढ्न थालेपछि हाटबजार बन्द गर्ने निर्णय
इलाम बसपार्क प्रयोगविहीन हुँदा स्थानीयवासी चिन्तित